Soosaarayaasha Kateetarka Intubation | Shiinaha Warshad Qashin-qubka Kawaarida
Beddelaha Cadaadiska Dhiigga
Sifeeyaha Nidaamka Neefsashada
Wareeg Neefsasho La Tuuri Karo
Xidhmada Kit Kateetarka Central Venous
Maskaxda Laryngeal Mask
SPO2 shidma iyo baaritaanka heerkulka
Maskaxda Laryngeal Mask (Silicone)
Maaskaro Sayniska Suuxdinta Dheddigga Dheddigga ah ee Iib ah
Iibka kulul Hme filter muruqa iyo nidaamka neefsashada
Wareegga Neefsashada Ballaaran Kateetarka Labaad ...
Qalabka Fasalka Caafimaadka 100ml 150ml 200ml Pca Iyo CBI ...
Double Lumen Endotracheal Tube
Tubbo laba-lumen ah (DLT) waa tuubbo endotracheal loogu talagalay in lagu go'doomiyo sambabaha qaab ahaan iyo jir ahaan. Tubbooyinka laba-lumen (DLTs) ayaa ah tuubooyinka inta badan la isticmaalo si loo siiyo hawo madax-bannaan sambab kasta. Hal-sambabada hawo qaadashada (OLV) ama go'doominta sambabka waa kala-soocid farsamo iyo shaqeyn oo ah 2 sambabood si loogu oggolaado hawo xulasho ah oo keliya hal sambab. Sambabka kale ee aan hawadu si habsami leh u hakinaynin ama u qaxay dhakhtarka qalliinka si loo fududeeyo soo-gaadhista qalliinka ee hawlgallada aan wadnaha ahayn ee laabta sida hababka loo yaqaan 'thoracic, esophageal', aortic and spine. Waxqabadkaani wuxuu dib u eegis ku sameynayaa adeegsiga DLT, tilmaamahiisa, iska horkeenka, iyo dhibaatooyinka qalliinka wadnaha.
Tube Endotracheal PVC Fasalka Caafimaadka oo leh tuubada nuugista
Tuubbada endotracheal ee loogu talagalay kateetarka wax lagu nuugo, oo ay weheliso shaqada tuubbada endotracheal iyo khadka nuugista labadaba, oo aad ugu habboon isticmaalka daawada suuxdinta.
Shirkadaha ugu sareeya Shiinaha China PVC Nasal Airway / Nasopharyngeal Airway
Koodhka Badeecada: BOT 128000 Hordhac: Nasopharyngeal Airway waa tuubo loogu talagalay inay bixiso marin hawo mareen ah oo ka yimaada sanka illaa iyo xiiqda dambe. Nasopharyngeal Airway wuxuu abuuri karaa wadiiqad patent wuxuuna kaa caawin karaa kahortaga marin hawo mareenka sababo la xiriira unugyada dhiig karka. Marinka Nasopharyngeal wuxuu marina hawo-mareen patent ah masaafada tuubada oo dhan. Nasopharyngeal Airway waa la jabin karaa haddii marinka sanku cidhiidhi yahay oo uu dumo dhexroorka hoose ee Nasopharyngeal Airway oo kara ...
Tube-ka tracheostomy-ka la tuuro oo nadiif ah oo leh Cuff
Tuubooyinka tracheostomy waxaa loo isticmaalaa si loo fududeeyo maamulka hawo-qaadista cadaadiska togan, si loo bixiyo marin hawo patent-ka loogu talagalay bukaannada u nugul xannibaadda hawo-mareenka sare, iyo inay siiso marinka marinka hoose ee neef-mareenka nadiifinta hawo-mareenka. Waxaa lagu heli karaa cabbirro iyo qaabab kala duwan.
Qiimaha Tube Fasalka PCV Tracheal Medical
Tuubada 'Endotracheal tube' waa tuubo balaastiig ah oo jilicsan oo afka la galiyo iyadoo la marsiinayo hawo mareenka (windpipe) si bukaanka looga caawiyo inuu neefsado. Tuubbada ilmo-galeenka ayaa markaa lagu xiraa hawo-qaade, kaas oo oksijiin geeya sambabada. Nidaamka gelinta tuubada waxaa loo yaqaan 'endotracheal intubation'.
Tuubbada tracheal ee leh tuubada hagta ee tuuraya dhuunta xididdada xoojiya
Tuubbada ilmagaleenka ee la xoojiyay waxay ku saleysan tahay tuubada xididada jirka. Waxaa la xoojiyay guga la geliyay tuubada, iyo kateetarka la geliyo hawo mareenka si ujeedada koowaad ee aasaasida iyo joogteynta marin haweenta patent-ka loo hubiyo isdhaafsiga ku filan ee oksijiinta iyo kaarboon laba ogsaydhka.
Tuurista Dhuunta Dhuunta Dhuunta ee Sanka lagu shubo
Tuubooyinka loo yaqaan 'Endized Endotracheal Tubes' waxaa loogu talagalay in lagu jiheeyo wareegga suuxdinta ee ka fog goobta hawlgalka - ha ahaato mid jiif ah ama jihada caudal. Tuubooyinka loo yaqaan 'Preformed Endotracheal Tubes' ayaa lagu heli karaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan noocyada carruurta iyo dadka waaweyn.
La tuuro Afka Guedel Oropharyngeal Airway
Marin-haweedka Oropharyngeal (oo sidoo kale loo yaqaanno hawo-mareenka afka, OPA ama hawo-mareenka qaabdhismeedka Guedel) waa aalad caafimaad oo loo yaqaan dariiqa marin-haweedka ee loo isticmaalo in lagu ilaaliyo ama lagu furo marin-haweedka bukaanka. Waxay ku sameysaa taas iyadoo ka hortageysa carrabka inuu daboolo epiglottis, taasoo ka hor istaagi karta qofka inuu neefsado.
La xiriir Anaga
Nanchang Biotek Teknolojiyada Caafimaadka Co., Ltd.
Telefoon: + 86-791-88113909
Wax soo baara Wixii Pricelist
Weydiimaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood. Wax Weydiinta Pricelist
Ugu dambeeyay Wararka
Dabaaldeggii Warshaddii Suuxdinta ee BIOTEK ee ...
Warshaddeena suuxinta ee BIOTEK waxay yeelan doontaa 5-maalmood oo fasax ah 1-da Maajo ilaa 5-ta May, 2021, si loogu dabaaldego Fasaxa Maalinta Shaqaalaha Adduunka.
Ku saabsan suuxdinta deegaanka
Hordhac Suuxdinta maxalliga ah (suuxdinta maxalliga ah) waa hab si ku-meelgaar ah looga xannibayo qabashada dareemayaasha aag ka mid ah jirka si loo soo saaro suuxdinta, oo loo yaqaan suuxdinta maxalliga ah. Marka loo barbar dhigo anesth-ka guud ...
Marka la eego baaxadda iyo dabeecadda saameynta suuxdinta, hababka suuxdinta ee hadda jira ayaa qiyaas ahaan loo kala qaataa sida soo socota. (1) Acupuncture analgesia iyo suuxinta suuxdinta Waa hab suuxin gaar ah de ...
Qeexida mashiinka suuxinta ayaa ah in bukaanka jirkiisa ama qeyb ka mid ah si ku meel gaar ah u lumiyo dareenka xanuunka. Qeexitaanka oo dhameystiran ayaa ah in bukaanka jirkiisa ama qeyb ka mid ah si ku meelgaar ah miyir beesho ...